‘माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ मा सर्वसाधारणको लगानी भविष्यका लागि आकर्षक पेन्सन हुनेछ’ - UrjaKhabar ‘माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ मा सर्वसाधारणको लगानी भविष्यका लागि आकर्षक पेन्सन हुनेछ’ - UrjaKhabar
काठमाडौं । डा. आत्मराम घिमिरे पछिल्लो दशकमा जलविद्युत् व्यवसायमा सक्रिया छन् । एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनामा उनको लगानी छ । बैंकिङ तथा इन्स्योरेन्स व्यवसायमा समेत संलग्न उनी पुँजीबजारका चिनिएका विश्लेषक तथा अध्येता हुन् । अझ भनौं, उनी पुँजीबजारका विज्ञ नै हुन् । लमजुङमा निर्माण भइरहेको उनी संलग्न २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ बाट अबको ३–४ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन हुँदैछ । यो आयोजनालाई उनले पुँजीबजारको दृष्टिकोणबाट पनि नियालेका छन् ।
उता आयोजना निर्माण गरिरहेको लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले आगामी भदौ ३ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्दैछ । कम्पनीले यसअघि नै आयोजना प्रभावित र स्थानीय जिल्लाबासीका लागि शेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ । स्नोफेड (हिमनदी) मा आधारित दोर्दी खोलाको बहाब आकर्षक रहेकाले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् तथा आम्दानी राम्रो रहेको दाबी गरिएको छ । यही सन्दर्भमा ऊर्जा खबरले घिमिरेसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
अहिले आयोजना निर्माणको कुन चरणमा छ ?
हामीले अधिकांश काम सकिसकेका छौं । अहिलेसम्म करिब ९८ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । मेसिन जडान तथा प्रसारण लाइनको केही काम बाँकी रहेकाले २–३ महिनामा सबै सकिन्छ । अबको चौथो महिनादेखि बिजुली बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
निर्माणमा केही समस्या छ ?
काम अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा खासै समस्या छैन । कोरोना महामारीका कारण आयोजना क्षेत्र पूर्णरूपमा लकडाउन गर्ने अवस्था आयो भने मात्र नत्र समस्या हुँदैन । आवश्यक सबै उपकरण आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ । प्रसारण लाइनको केही काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर गर्नुपर्नेछ । त्यो भइरहेको छ ।
कुन आधारमा यो आयोजना आकर्षक वा प्रतिफलयुक्त छ भनेर साधारण शेयर लगानीकर्तालाई विश्वस्त दिलाउनुहुन्छ ?
जलविद्युत्मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राविधिक पक्ष हो । यसमा पनि सबैभन्दा हेर्नैपर्ने खोलाको औसत पानीको बहाब (हाइड्रोलोजी) हो । दोर्दी खोलाको पानीको बहाब र हाम्रो अध्ययन तथा डिजाइनअनुसार २६ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । तर, भविष्यमा घटबढ हुने पानीको परिमाणलाई समेत ध्यानमा राखेर आयोजना २५ मेगावाट नै निर्माण गरिएको छ । यसो हुँदा भविष्यमा समस्या आउँदैन ।
कम्पनीसँग अरू २ आयोजना पनि रहेको र त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत् तथा आम्दानी पनि जोडिने हुँदा हामीले लगानीकर्ता तथा साधारण शेयरधनीलाई घोषणा गरेको लाभांश दिन सक्छौं ।
अर्को कुरा, हामीले विद्युत् उत्पादन सुरु भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् दोस्रो वर्षको आम्दानीबाट लाभांश दिने घोषणा गरेका छौं । सुरुमा १२.५ प्रतिशत र आयोजना सञ्चालनको अन्तिम वर्षतिर ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिने हाम्रो योजना छ । आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकले पनि यही देखाएका छन् ।
कम्पनीसँग अरू २ आयोजना पनि रहेको र त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत् तथा आम्दानी पनि जोडिने हुँदा हामीले लगानीकर्ता तथा साधारण शेयरधनीलाई घोषणा गरेको लाभांश दिन सक्छौं । अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष, अनुभवी, सक्षम र शेयरबजारमा पनि भिजेका लगानीकर्ता छन् । राम्रोसँग अध्ययन नगरी वा हाइड्रोलोजी नहेरी निर्माण भएका र भनेको समयमा लाभांश दिन नसक्ने आयोजना जस्तो दोर्दी होइन ।
अहिले बजारमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनी मध्ये सानिमा हाइड्रो समूहको शेयर मूल्य सबैभन्दा राम्रो छ/मानिन्छ । हाम्रो त्यो भन्दा पनि राम्रो हुन्छ । यसैले लगानी गर्ने सन्दर्भमा द्विविधामा पर्नुपर्दैन । सर्वसाधारणले ढुक्कसँग लगानी गरे हुन्छ ।
विद्युत् उत्पादन तोकिएको समयभन्दा ढिलो हुँदा लागत केही बढेको छ । त्यही अनुसार आम्दानीमा असर परेको देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार प्रतिफल दिन सम्भव छ त ?
हामीले बाहिर ल्याएका सूचकहरू अर्थात् घोषणा गरेको प्रतिफलमा पर्याप्त अध्ययन गरिएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट वित्तीय विश्लेषण गराएर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी जस्ता नियामक निकायबाट स्वीकृत गराएर घोषणा गरिएको हो । यसैले, यसमा त्यति शंका गरिरहनु पर्दैन । फेरि, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपद् आयो भने अलग कुरा नत्र हामी हाम्रो लक्ष्यमा स्पष्ट छौं ।
अन्य नदी प्रवाही आयोजनाको तुलनामा माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ कुन पक्षमा फरक छ ?
अरू आयोजना वा प्रवर्द्धकको नराम्रो यो राम्रो भनेर तुलना गर्न त म सक्दिनँ । अरूको टिप्पणी गर्न त्यति राम्रो पनि हुँदैन । तर, दोर्दी भूकम्प, नाकाबन्दी बाढी–पहिरो र कोरोना महामारी समेत झेलेर विद्युत् उत्पादन चरणमा पुगेको छ । यति हुँदा पनि बेपत्तासँग लागत बढेको होइन । प्रतिमेगावाट १८.५४ करोड रुपैयाँमा पूरा गर्दैछौं । यति लागतमा आयोजना बन्नु नराम्रो हुँदै होइन ।
दोर्दी कोरिडोरमा विद्युत् उत्पादन गर्ने पहिलो आयोजना पनि यही हुँदैछ । अरू जस्तो आज वा एक महिना व्यापार भयो प्रतिफल दिन सकिन्छ । अर्को महिना भएन, दिन सकिँदैन भन्ने जस्तो होइन, जलविद्युत् क्षेत्र । हामीले यति लामो समयदेखि धैर्य गरेर आयोजना बनाइरहेका छौं । सर्वसाधारणले पनि डेढ–दुई वर्ष धैर्य गर्नुपर्छ । त्यसपछि त पक्कै बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य आकर्षक हुनेछ ।
म त भन्छु– सूचीकृत हुनेबित्तिकै एक–डेढ सय रुपैयाँमा शेयर नबेच्नुस् । लामो समयका लागि वा पेन्सन खाने गरी धैर्य गर्नुस् । आयोजनाले निराश पार्दैन । हिजो चिलिमेले जलविद्युत्मा आकर्षण गरेको हो । दोर्दी कोरिडोरका आयोजना वा माथिल्लो दोर्दी पनि त्यो भन्दा कम नहोला ।
विद्युत् उत्पादन भएकै वर्ष लाभांश दिन सक्नुहुन्छ त ?
पहिलो वर्ष नै त कसैले सक्दैन । सम्भव नहुने कुरा बोल्नु पनि हुँदैन । दोस्रो वर्षको आम्दानीबाट तेस्रो वर्ष लाभांश दिन कुनै समस्या हुँदैन । वार्षिक ऊर्जा उत्पादन राम्रो हुँदै गयो र त्यही अनुसार आम्दानी पनि भयो भने एक–डेढ वर्षअघि पनि लाभांश बाँड्न सकिन्छ । तर, यसमा अहिले नै हतार गरेर प्रचार गर्न उचित हुँदैन । कम्तीमा २ वर्षपछि हामीले लाभांश ख्वाउँछौं । यसमा दुई मत छैन ।
वार्षिक आम्दानी र खर्चको विश्लेषण तथा बैंकको ऋण तिर्ने अवधि कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ ?
सबैभन्दा ठूलो खर्च बैंकको ब्याज नै हो । ‘हामीले लाभांश नदिने हो भने ८ वर्षमा बैंकको ब्याज तिर्न सक्छौं’ भनेका छौं । तेस्रो वर्षदेखि लाभांश दिने घोषणा भइसकेको हुँदा १२ देखि १५ वर्षमा ऋण तिरिसकिन्छ । त्यसपछि त शुद्ध आम्दानी हो । सञ्चालन तथा मर्मत खर्च त्यति ठूलो हुँदैन । हामीले वार्षिक आम्दानी करिब ७५-८० कराेड रुपैयाँ (प्रतिमेगावाट ३ कराेड रुपैयाँ) प्रक्षेपण गरेका छाैं ।
हामीले विद्युत्गृहमा जडान हुने रनर, टर्बाइन, जेनेरेटर लगायत उपकरण युरोपियन प्रविधिकै राखेका छौं । यसो हुँदा पटक–पटक मर्मत गरिरहनुपर्ने झन्झट हुँदैन । निरन्तर विद्युत् उत्पादन भइरहने हुँदा लक्षित आम्दानीमा असर पर्दैन ।
जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको पछिल्लो समयमा कस्ता आयोजनामा लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई सुझाव दिनुहुन्छ ?
पहिलो त हाइड्रोलोजी हेर्नुपर्यो । आफूले बुझिँदैन भने अरूसँग सल्लाह परामर्श लिनुपर्छ । आयोजनाले कति वर्षमा ऋण तिरिसक्छ, आम्दानी कस्तो प्रक्षेपण गरेको छ र प्रतिफल दिने आधार के हो ? यसमा राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ । अर्को, गुणस्तरीय उपकरण जडान गरे÷नगरेको पक्ष पनि ख्याल गर्नुपर्छ । हाम्रो आयोजनामा हामीले यी सबै पक्षको राम्रो अध्ययन गरेर त्यही अनुसार काम गरेका छौं । यसैले, दोर्दीमा गरेको लगानी भविष्यमा आउने ‘पेन्सन’ ठान्नुभए हुन्छ ।‘माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ मा सर्वसाधारणको लगानी भविष्यका लागि आकर्षक पेन्सन हुनेछ ।